Levi's Jeans | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Brandsdị ndị ọzọ na-ahọrọ ihe eji eme ihe banyere obibi, na otu n’ime mgbakwunye ndị kachasị ọhụrụ bụ Levi nke na-enye jeans mere site na mkpofu. N'efu Ọ bụ usoro nke na-agbanwe Levi 504.
Kemgbe Greenpeace tinye ụdị aha n'ihu ọrụ ha maka mmetụta gburugburu ebe obibi, anyị ahụwo ọmụmụ nke nnakọta ndị nwere obi ike na-eji usoro mmetọ ọhụrụ na-erughị ala karị. Mgbe H&M na nchịkọta ya Mara, nke bu otu ihe omuma atu putara ihe, ugbua obu uzo nke Levi nke na-enye otutu 504 jeans nke ejiri ihe eji eme ya n'efu.
Ọ bụ echiche amamihe dị na ya nke mụtara Levi's jeans mgbanwe kemgbe 1853, si otú a na-egosi nke ahụ Levi Ọ na-adị n'ihu ndị niile na-asọmpi ya, ma ọ bụ n'ụdị ejiji ma ọ bụ n'usoro teknụzụ. Ka ewere N'efu, "Ọ dịghị ihe mkpofu", Levi chọrọ akwa na-eguzogide ọgwụ na-enweghị ụdị ụdị ọ bụla mmalite.
Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ichebe onyinyo nke tela nwa agbogho mgbe ụdị na-agbanwe, ọ bụ ihe ịma aka nke Levi na ị na-ahọrọ gị modelo 504 dị ka nkwado, ọ chọrọ ịchụkwute nnukwu ụdị ndị na-elekọta nke ọma gburugburu ebe obibi.
Ozi ndị ọzọ - Ọhụrụ osisi anụ ahụ mere site na nje
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ọmụmụ ihe ọmụmụ » Agriculturelọ ọrụ ubi » Livai na eco-enyi na enyi jeans mere site n'efu
Nke a na-ada ụda, mana gịnị ka ị chere maka ọnụ ahịa ndị jeans ahụ? € 95 adịghị ka m ihe ọ bụla «ebe obibi» ...
Zaghachi na mica
Tipsfọdụ ndụmọdụ maka ịnweta mmiri distilled n'efu